Taageerada xisbiga cunsuriyiinta SD oo aad u siyaaday | Somaliska
Af-Soomaali / Featured / sd / Siyaasada
Xisbiga cunsuriga ah ee lagu magacaabo Sverige Demokraterna (SD) ayaa taageerada uu ka haysto shacabka Sweden ay aad kor ugu kacday bilihii la soo dhaafay.
Tiro goob ay samaysay shirkada Sifo oo si joogto ah baaritaan ugu samaysa aragtida dadka Sweden ee lagu cabirayo sidii ay noqon lahayd natiijada doorashada haddii maanta la qabto, ayaa lagu soo bandhigay in SD ay hada haystaan 7.7 dhibcood, iyagoo markii ay baarlamaanka soo galeen sanadkii 2010 ay heleen 5 dhibcood. Haddii uu xisbgia SD sii haysto taageeradaan ayuu noqonayaa xisbiga afaraad ee ugu weyn Sweden.
Taageerada xisbiga SD ayaa qaasatan kor u kacday magaalooyinka Malmö iyo Göteborg. qaasatan magaalada Malmö iyo agagaarkeeda ayaa xisbiga SD waxa uu helay cod gaaraya 11.2. magaalada Göteborg ayay ka haystaan taageero gaaraysa 5.9 dhibcood.
Sababta ka dambaysa taageerada kor u kacday ee xisbiga ayaa la dhihi karaa in dadka Sweden ay la qabsadeen xisbigaan oo hada isku dayaya in uu la mid noqdo xisbiyada kale. Waxaa kale oo arintaan loo aanayn karaa dhacdooyinkii la xariiray Muslimiinta iyo Islaamka ee bishii la soo dhaafay ka dhacay wadamada maraykanka iyo bariga dhexe.
isbuucaan ayaa gudoomiyaha xisbiga SD waxa uu sheegay in xisbigiisa uu ka sifaynayo dadka uu ugu yeeray cunsuriyiinta iyo xagjirka balse arintaas ayay inta badan dadka la socdo arimaha xisbigaan ku qosleen maadaama fikrada xisbiga oo dhan ay ku dhisantahay cunsuriyad iyo ajaanib nacayb.
Dhinaca kale, xisbiyada waaweyn ee ku jira baarlamaanka ayaa hada waxaa taageerada ugu badan haysta xisbiga Social Demokraterna (S) oo haysta 32.1 dhibcood. Dhinaca xulufada dowlada ayaa hoos u dhac ku socota iyadoo haddii maanta doorashada la qaban lahaa uu guud ahaan baarlamaanka ka bixi lahaa xisbiga Kristdemokraterna (KD).
Asc, anniga waxan u haystaa in xisbigan ay sameysteen dad iyagaba soo galootinimo mar hore oo 500 sanno ka hor ah ay awoowayaashood wadankaan yimideen ama qaab shaqaalenimo ama magangelyo midkeey doonaanba haku yimaadeene. Waxayna soomaalidu ku maahmaahdaa martidu iyadaa kala naxda.
Su’aalna waan qabaa haddii aad iiga jawaabi kartiin kuligiin waa idiin furan tahay, waxayna tahay su’aasheydu horta yaa swedish dhalad ah oo dhulkaan loogu yimid?.
Walaalayaal waan idin salaamey dhamaantiin. Salaata kor ku xusan ee Islaamka.
Salaan kaddib, waxaan filayaa in xaqiiqada marka la eego ajaanibta laftoodu aysan daahir aheyn. Annaguna aan nahey kuwa ukaalimeynaya in ay siyaaddo taageerada iyo naceybka ajnabiga. Haddaba hadii aan nahey Somali waxaa na quseeya teenna ee aan isku dayno horta inaan kulligeen ku fakarno dib unoqosho iyo inaan muujinno karti. Waxaan garan karnaa dadka cunsuriyadda aan ku eedeyneyno mid ka sareysa iney nagu jirto annaga ama ha ahaato diiniyyan ama wadaniyad ahaan. Waxaa suura gal ah deegaan kasta oo Soomaali dagantahey in aan laheli karin inaan isku fikrad wax qaban ka ahaanno arrimaheenna.
Dhamaan bahda Somaliska oo aan filaayo inuu yahey webka ugu weyn ee Soomaali leedahey ee Sweden hala sameeyo urur xeer iyo shuruuc leh oo agaasima dhamaan arrimaha umaddeenna.
Waxaan qabaa yeynaan ku mashquulin waa cunsuri iyo maahan ee aan ku mashquulno wax qabsi iyo inaan yeelanno urur taaba gal ah oo wax ka qabta arrimaha umaddeenna. Dhibteenana dadka ka qabta dhibtii nagu soo socotana ka hadla.
Mahadsanidiin, wixii qaldan kaligey ayaa leh. Wixii fiicanna dadkoo dhan ayaa ila leh.
AJINABIGA WAXYABAHA AY SAMEYAN HADA EGTO WAXLANACO WAYIHIN DHAGCAS RUNTIIWUXUU UKACAYA WAXBADAN AYA ISBADALAY WADANKA MARKAN IMID 3 SANO KAHOR POLIC MA ARKIJIRIN HADANA INTAN WAXAN ARKA DHALINAYO AYAGO LATAGAN WAXAN OARANAKARA USBUCII 5 JER KABADAN BAN ARKA POLIC DATAGII BABATAY MARKA MA SAHLANA HASHU KUWAAS INLATARXIILO MAHEE NIMAN WAA WAYN OO 30 JIRA OO CIYALNIMO KUJOGA WADANKAN BA ISKA DHIGAYA CARURTIBALAFARABIXINAYA OO QASHINKI LASINAYA WALAIHI XAFADA AJINABIGU DAGANYAHAY WAAD KAYABAYSAA HADA GÖTEBORG 8 SOMALI AH AYA SABTIDI LAGU XIRAY AYGOO DADKA BRANAYA OO TELFONADA KA URUSANAYA LAGU SOO HELAY KA SHEKEE HEE DHIBKA DADKAN SOOGALOTIGA AYAGA ISU KENAY UMADANA UKENAYA WIILKAAS WNAKURACAY ARINKISA SOOMALIDU AYAHOODA HAKATASHADAN SAXAAFADU WAXBADAN BAYQABANKARA BARNAMIJYO AYAYQABANKARA CAWIMAD DIYAR AYA LAYDINLAYAHAY EE UMADA WAX QABKEDA USOO KACA BARNAMIJYO HALAGA SAMEYO WALIDKA BULSHAN SOMALIYEED U ISTAGA DADKINA AQONTA LEH DHANKASTA WAA KABAHDILAYIHIIN QOFKA IGAHOREYA FIKIRKISA AYAN KURACAY RUNTII